माईक्रोसफ्ट अफिस छात्र छूट (२०२०) - स्कूल र कलेजहरू - प्रस्तावहरू
माइक्रोसफ्ट अफिस एक सबैभन्दा लोकप्रिय कागजात निर्माण र सम्पादन सफ्टवेयर हो। यो विद्यार्थी, पेशेवर, र व्यापार बीच लोकप्रिय छ। तपाइँले यस सम्पादन सेवा प्रयोग गरेर धेरै फाइदाहरू पाउनुहुनेछ। हामी सफ्टवेयरले टेबलमा ल्याउने शानदार प्रयोगहरूको आनन्द लिन्छौं।
यस गाईडमा हामी सबै विद्यार्थी छुटमा छलफल गर्नेछौं।
के माइक्रोसफ्ट अफिसमा विद्यार्थी छूट छ?
माइक्रोसफ्ट टेक जायन्ट छ, र तिनीहरू सँधै समुदायलाई फिर्ता दिने आशामा छन्। त्यहाँ धेरै विधिहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो श्रोताको लागि यो गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी छुट कार्यक्रम सबै योग्य प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। तपाईं यो अफर प्राप्त गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग मान्य विद्यार्थी आईडी छ। धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरूले यसलाई आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई राम्रो सम्झौता दिन प्रयोग गरिरहेका छन्। डेस्कटप अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न तपाईंले योजना खरीद गर्नु पर्छ। यो उपलब्ध हुनेछ एक पटक तपाईंको शैक्षिक संस्थान एक छात्र योजना को लागी माइक्रोसफ्ट संग सम्बन्ध। एक व्यक्ति को रूप मा, तपाइँ सीधा तपाइँको प्रयोग को लागी खरीद गर्न सक्नुहुन्न।
माईक्रोसफ्ट Minecraft Aka.ms/remoteconnect त्रुटि ठीक गर्नुहोस्
एक माईक्रोसफ्ट अफिस छात्र छूट प्राप्त गर्न को लागी:
तल दिईएको गाईड अनुसरण गरेर प्रयोगकर्ताहरूले विद्यार्थी छुट पाउन सक्छन्। हामी तपाईंको सदस्यता मूल्य घटाउन आवश्यक सबै चरणहरू उल्लेख गर्दछौं। यहाँ पछ्याउन तपाईका लागि चरणहरू छन्।
Office 365 वेबसाइटसँग शिक्षा योजना प्राप्त गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक विशिष्ट विकल्प छ। तपाईं यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक । यो छुट छुट प्रक्रिया आरम्भको साथ मद्दत गर्दछ।
नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटमा उनीहरूको स्कूल आईडीको साथ साइन अप गर्न सक्छन्। तपाईं प्लेटफर्ममा .edu आईडी प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ।यसले तपाईंलाई विशेष विद्यार्थी छुटमा पहुँच गर्न सक्षम गर्दछ। मैले आशा गरेको थिए कि तपाईले म ईमेल विद्यार्थीको विकल्प रोज्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं आफ्नो ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहुन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले माइक्रोसफ्ट अफिस खाता बनाउनु पर्छ। यसले तपाईंको काम असाधारण हल्का बनाउनेछ। यस सुविधाहरूको उपयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै फाइदाहरू हुन सक्छन्। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं आफ्ना सबै विवरणहरू सही तरीकाले प्रविष्ट गर्नुहोस्। खाता सिर्जना प्रक्रियाको साथ छिटो सुरू गर्न स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ताहरूले नि: शुल्क माइक्रोसफ्ट अफिस5365 सुविधाहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्न सक्दछन्। यो क्लाउड प्लेटफर्ममा उपलब्ध छ।जो कोहीले पनि यस विधि मार्फत माइक्रोसफ्ट अफिसमा अनलाइन काम गरिरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले कुनै कागजातहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्न सक्दछन्।
Voila! ती विद्यार्थीहरूको लागि Microsoft Office5365 प्रयोग गर्नका लागि चरणहरू थिए। यो विद्यार्थी खाता भएका सबैको लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ।
माइक्रोसफ्ट अफिस विद्यार्थीको सुविधाहरू:
माइक्रोसफ्ट अफिस विद्यार्थी छूट एक आवश्यकता छैन। यो तपाईका लागि उत्तम छ जब सम्म तपाईं अनलाइन संस्करणको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ सुविधाहरू छन् जुन तपाईं Office5365 A1 विद्यार्थी योजनाको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
१. Microsoft अनुप्रयोगहरूमा नि: शुल्क पहुँच
विद्यार्थी खाताको साथ प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको कलेज अनुप्रयोगहरू र असाइनमेन्टहरू पूरा गर्न यी अनुप्रयोगहरूलाई कुशलतासाथ प्रयोग गर्न सक्दछन्। यो उनीहरूका लागि उत्तम छ जो आफ्नो सबै उत्पादकत्व को लागी एक ठाउँ चाहान्छन्। प्लेटफर्म अनुप्रयोगहरूमा केहि एक्सेल, वर्ड, टोली, एक नोट, पावरपोइन्ट, र अधिक समावेश गर्दछ।
२. एउटा ड्राइभ
एक ड्राइव सबै उपयोगकर्ताहरु को लागी उपलब्ध क्लाउड प्लेटफर्म प्रयोग गर्न को लागी स्वतन्त्र छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यो कोसिस गरी हेर्नुहोस्। यो उपयुक्त छ जोसँग आफ्नो सामग्री अपलोड गर्न खाली ठाउँ चाहिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले सजिलैसँग एक ड्राइव लिंक उनीहरूका सहपाठीहरूको साथ साझा गर्न सक्दछन्।
माइक्रोसफ्ट एक ब्रान्ड हो जसले उनीहरूको ग्राहक सुरक्षालाई ठूलो महत्त्व दिन्छ। प्रयोगकर्ताहरूले दीर्घकालीन सुरक्षित वातावरणको आशा गर्न सक्दछन्। यो जो कोहीलाई आफ्नो गोपनीयता सम्मान गर्न को लागी धेरै लाभदायक छ।
माइक्रोसफ्ट अफिस विद्यार्थी छूट प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक राम्रो साइन अप हो। हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि आज यो प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईंको स्कूल र कलेज उपयोगको लागि उत्पादन मञ्च हो।
सीबीएस सबै पहुँच छात्र छूट
रब्बिट वैकल्पिक (२०२०) - शीर्ष Similar समान वेबसाइटहरू
सम्पूर्ण फिल्महरू नि: शुल्क हेर्नुहोस्
hd टिभी अनलाइन नि: शुल्क हेर्नुहोस्
नि: शुल्क नयाँ चलचित्र साइन अप छैन
केबल टिभी प्रतिस्थापन गर्दछ
२०१ put अघि पुटलोकरहरू अघिल्लो रात